US Archives - HealthTimes
March 8, 2020 Michael Gwarisa
THE second Zimbabwe Population based HIV Impact Assessment (ZIMPHIA) 2020 survey has ended on a high note amidst indications that the survey managed to reach cover more than 19 000 households countrywide. By Michael Gwarisa The first phase of the survey which kicked off in November, 2019 is a population household survey led by the Health and Child Care Ministry working in collaboration with the Zimbabwe National Statistics Agency (Zimstat), National Aids Council (Nac) and ICAP at the Columbia University. Giving the keynote address on behalf of Health and Child…
BREAKING NEWS, Health News, HIV/AIDSHIV, ICAP, NAC, ngwarai sithole, PEPFAR, US, zimphiaLeave a comment
October 11, 2018 October 11, 2018 NewsRoom
The United States Government has over the past years injected into Zimbabwe $750 000 in the fight against human trafficking. By Kudakwashe Pembere US Ambassador to Zimbabwe Brian Nichols addressing delegates at a Human Trafficking Discussion said human trafficking was an increasing phenomenon the world over with most victims being third world countries’ citizens. “The United States Government is supporting Zimbabwe with $750 000 in anti-trafficking assistance that goes to victim services, awareness, referrals, aligning legislation, and building regional capacity,” he said. US Harare Embassy Political Officer Ben Wiselogle…
Health NewsUSLeave a comment
U.S. to maintain HIV funding for Zimbabwe
By Staff Reporter THE United States Ambassador Harry Thomas Jr says says his country will maintain, and even increase, HIV funding levels to Zimbabwe despite a change in administration. There were fears that the new American President Donald Trump would pull the plug on Zimbabwe, following announcement that his government was working on reducing international aid to various countries. Addressing journalists during a tour of the OK- PEPFAR First Street Stage during the just ended Harare International Festival of the Arts (HIFA), Ambassador Thomas said international aid has not been…
BREAKING NEWS, Health News, HIV/AIDSGLOBAL FUND, Harry Thomas, HIV/AIDS, PEPFAR, USLeave a comment